တရုတ်တင်းနစ်ဘောလုံးလေ့ကျင့်ရေးစက် App -S4015C စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |Ismart
အဆင့်မြင့် S8025 siboasi badm...
High end S8025 siboasi ကြက်တောင်လေ့ကျင့်ရေးစက် 1. ကွန်ပျူတာဖြင့်...
Siboasi ကြက်တောင် လွန်းပျံအစာကျွေးစက် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မော်ဒယ်ရောင်းရန် : ...
Siboasi App မော်ဒယ် တင်းနစ်ဘောလုံးစက် မော်ဒယ်: S4015C ...
မော်ဒယ်- တင်းနစ်စက် T1600 မြန်နှုန်း- တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ 20-140 ခန့် စက်အရွယ်အစား-...
မော်ဒယ်- တင်းနစ်ဘောလုံးစက် S4015 မြန်နှုန်း- 20-140 km/h စက်အရွယ်အစား- 57*...
App -S4015C ဖြင့် တင်းနစ်ဘောလုံးလေ့ကျင့်ရေးစက်
1. APP ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ မော်ဒယ်အသစ် ;
2. အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့် စမတ်နာရီကို ထည့်သွင်းရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။
4.ကြီးမားသောဘောလုံးစွမ်းရည် - ဘောလုံး 160 ခန့်;
5. မတူညီသောနိုင်ငံများနှင့်တွေ့ဆုံရန် ပလပ်ထိုးပါ။
7. လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်း ;
Siboasi အက်ပ်မော်ဒယ်တင်းနစ်ဘောလုံးစက်ရောင်းရန်ရှိသည်။ယခု :
မော်ဒယ်- မိုဘိုင်းအက်ပ်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် S4015C တင်းနစ်ဘောလုံးလေ့ကျင့်ရေးစက် အကြိမ်ရေ- ဘောလုံးတစ်လုံးလျှင် 1.8-9 S
စက်အရွယ်အစား 57cm*41 cm*82 cm ဘောလုံးစွမ်းရည်- ဘောလုံး ၁၅၀-၁၆၀ ခန့်
ပါဝါ (လျှပ်စစ်): AC Power: 110V-240V ဘက်ထရီ အားအပြည့်သွင်းတိုင်း5နာရီခန့် ကြာရှည်ခံပါသည်။
ပါဝါ (ဘက်ထရီ): DC 12V ပါ။ စုစုပေါင်းအလေးချိန်ထုပ်ပိုးခြင်း။ ထုပ်ပိုးပြီးနောက် 36 KGS
စက်အသားတင်အလေးချိန် စက်အတွက် 28.5 KGS - အလွန်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ အာမခံချက်-2နှစ် Warranty နှင့်အတူ
ထုပ်ပိုးမှု တိုင်းတာခြင်း- 62 စင်တီမီတာ * 49 စင်တီမီတာ * 67 စင်တီမီတာ အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Siboasi အရောင်းဌာန
ရွေးချယ်နိုင်သော (အပိုကုန်ကျစရိတ်)- အဝေးထိန်းစနစ်နှင့် စမတ်နာရီ အရောင် အနက်၊ အနီ၊ အဖြူ
ဤ Siboasi တင်းနစ်စက်အက်ပလီကေးရှင်း၏အားသာချက်များ
1. အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု (အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့် စမတ်နာရီထိန်းချုပ်မှု-အပိုကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်)။
2. Built-in ဘက်ထရီ : အားအပြည့်သွင်းပြီးတိုင်း ကြာရှည်ခံမည့်အချိန်၊
မတူညီသောနိုင်ငံများနှင့်တွေ့ဆုံရန် 3.110-240V ကိုအသုံးပြု၍
4. အဖြူ / အနီရောင် / အနက်ရောင်ရွေးချယ်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်;
5. ယခု Market တွင်ရောင်းရန်အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများ။
6. US ဂိုဒေါင်နှင့်ဥရောပဂိုဒေါင်သည်အလွန်မြန်ဆန်သောပို့ဆောင်မှုကိုတွေ့ဆုံရန် ;
သင့်စစ်ဆေးရန်အတွက် လက်ရှိမော်ဒယ်များအားလုံးအတွက် နှိုင်းယှဉ်မှုစာရင်း
မော်ဒယ် အရောင် စွမ်းရည် အရှိန် အကြိမ်ရေ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ် ထိန်းချုပ်မှု ဖျူး ပစ်ခတ်မှုစနစ် topspin & back spin ပုံသေအမှတ် နှစ်ကြောင်း သုံးလိုင်း မျဉ်းကြောင်း အလင်းနက်ဘောလုံး အလျားလိုက်မျဉ်း
S2015 အနက်/အနီ ဘောလုံး 150 ၂၀-၁၄၀ 1.8-6sec/ဘောလုံး x အဝေးထိန်း 20A အတွင်းပိုင်း √ √ x x x √ ×
S3015 အနက်/အနီ/အဖြူ ဘောလုံး 150 ၂၀-၁၄၀ 1.8-6sec/ဘောလုံး x အဝေးထိန်း 20A အတွင်းပိုင်း √ √ လိုင်းကျယ်သည်။ √ √ (၆ မျိုး) √ x
S4015C အနက်/အနီ/အဖြူ ဘောလုံး ၁၆၀ ၂၀-၁၄၀ 1.8-9sec/ဘောလုံး √ စံသတ်မှတ်ချက်- အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု (ရွေးချယ်နိုင်သောအတွက် စောင့်ကြည့်နှင့် အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှု) 30A အတွင်းပိုင်း √ √ အကျယ်/အလယ်/ကျဉ်း-မျဉ်း √ √ (5 အမျိုးအစား √ √
S4015 အနက်/အနီ/အဖြူ ဘောလုံး ၁၆၀ ၂၀-၁၄၀ 1.8-6sec/ဘောလုံး √ အဝေးထိန်း 30A အတွင်းပိုင်း √ √ အကျယ်/အလယ်/ကျဉ်း-မျဉ်း √ √ (၆ အမျိုးအစား √ √
T1600 အနက်/အနီ ဘောလုံး ၁၆၀ ၂၀-၁၄၀ 1.8-6sec/ဘောလုံး √ အဝေးထိန်း 30A အတွင်းပိုင်း √ √ အကျယ်/အလယ်/ကျဉ်း-မျဉ်း x2အမျိုးအစား ကြက်ခြေခတ် x √
W3 အနီေရာင် ဘောလုံး ၁၆၀ ၂၀-၁၄၀ 1.8-6sec/ဘောလုံး x အဝေးထိန်း 20A အတွင်းပိုင်း √ √ x x x √ x
W5 အနီေရာင် ဘောလုံး ၁၆၀ ၂၀-၁၄၀ 1.8-6sec/ဘောလုံး x အဝေးထိန်း 20A အတွင်းပိုင်း √ √ လိုင်းကျယ်သည်။ x2အမျိုးအစား ကြက်ခြေခတ် √ x
W7 အနီေရာင် ဘောလုံး ၁၆၀ ၂၀-၁၄၀ 1.8-6sec/ဘောလုံး x အဝေးထိန်း 20A အတွင်းပိုင်း √ √ လိုင်းကျယ်သည်။ √4အမျိုးအစား ကြက်ခြေခတ် √ x
မော်ဒယ် အလျားလိုက် ချိန်ညှိမှုထောင့် ဒေါင်လိုက်မျဉ်း ဒေါင်လိုက်ချိန်ညှိမှုထောင့် lob ကျပန်း LCD display အဝေးထိန်း AC ပါဝါ DC ပါဝါ ဘက်ထရီပြသမှု ပင်မမော်တာ S ball devider ဆွဲတံ ရွေ့လျားဘီး ခရီးဆောင် အာမခံ
S2015 အလိုအလျောက် x အလိုအလျောက် x √ √ 110V/220V ရွေးချယ်နိုင်သော x အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ ပုံမှန် အဆင့်မြင့် √ 2
S3015 အလိုအလျောက် x အလိုအလျောက် x √ √ 110V/220V အတွင်းပိုင်း 3-4 နာရီ x အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ ပုံမှန် အဆင့်မြင့် √ 2
S4015C အမှတ် 60 ချိန်ညှိခြင်း။ √ အချက် 20 ချိန်ညှိခြင်း။ √ √ စံသတ်မှတ်ချက်- အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု (ရွေးချယ်နိုင်သောအတွက် စောင့်ကြည့်နှင့် အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှု) 110V/220V အတွင်းပိုင်း 4-5 နာရီ √ အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ အဆင့်မြင့် အဆင့်မြင့် √ 2
S4015 အမှတ် 60 ချိန်ညှိခြင်း။ √ အချက် 30 ချိန်ညှိခြင်း။ √ √ √ 110V/220V အတွင်းပိုင်း 4-5 နာရီ √ အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ အဆင့်မြင့် အဆင့်မြင့် √ 2
T1600 အမှတ် 60 ချိန်ညှိခြင်း။ √ အချက် 30 ချိန်ညှိခြင်း။ √ √ √ 110V/220V အတွင်းပိုင်း 4-5 နာရီ √ အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ အဆင့်မြင့် အဆင့်မြင့် √ 2
W3 အလိုအလျောက် x အလိုအလျောက် x √ √ 110V/220V ရွေးချယ်နိုင်သော x အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ ပုံမှန် အဆင့်မြင့် √ 2
W5 အလိုအလျောက် x အလိုအလျောက် x √ √ 110V/220V ရွေးချယ်နိုင်သော x အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ ပုံမှန် အဆင့်မြင့် √ 2
W7 အလိုအလျောက် x အလိုအလျောက် x √ √ 110V/220V ရွေးချယ်နိုင်သော x အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ ပုံမှန် အဆင့်မြင့် √ 2
မိုဘိုင်းအက်ပ်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် S4015C တင်းနစ်စက်အတွက် အောက်တွင် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များ
S3015 အနက်/အနီ/အဖြူ ဘောလုံး 150 ၂၀-၁၄၀ 1.8-6sec/ဘောလုံး x အဝေးထိန်း 20A အတွင်းပိုင်း √ √ လိုင်းကျယ်သည်။ √ √(6 အမျိုးအစား) √ x
S4015C အနက်/အနီ/အဖြူ ဘောလုံး ၁၆၀ ၂၀-၁၄၀ 1.8-9sec/ဘောလုံး √ စံ : အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု (စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်စေရန်အတွက် Watch နှင့် Remote Control ) 30A အတွင်းပိုင်း √ √ အကျယ်/အလယ်/ကျဉ်း-မျဉ်း √ √(5 အမျိုးအစား √ √
S4015C အမှတ် 60 ချိန်ညှိခြင်း။ √ အချက် 20 ချိန်ညှိခြင်း။ √ √ စံ : အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု (စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်စေရန်အတွက် Watch နှင့် Remote Control ) 110V/220V အတွင်းပိုင်း 4-5 နာရီ √ အဆင့်မြင့် နှစ်ဆ အဆင့်မြင့် အဆင့်မြင့် √ 2
ယခင်- ပုံသေ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း တရုတ် Siboasi အသစ်ရောက်ရှိလာသည့် စမတ်ကြိုးထိုးစက် Intelligent Computer Control Stringing (S3169)
နောက်တစ်ခု: မိုဘိုင်းအက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု S4025C ဖြင့် Siboasi ကြက်တောင်အစာကျွေးစက်
siboasi s2015 တင်းနစ်စက်ကိုဝယ်ပါ။
siboasi တင်းနစ်ဘောလုံးစက် W5 ကိုဝယ်ပါ။